हर्क बहादुर लामगादे (रोहित) Archives | साहित्यपोस्ट
हर्क बहादुर लामगादे (रोहित)
निबन्ध : मनका बारेमा मनको विचार
हर्क बहादुर लामगादे (रोहित)	 २४ आश्विन २०७८ १८:०१ 0
मन, सबैको हुन्छ । विनामनको मान्छे नै हुँदैन यो संसारमा । ‘कस्तो हुन्छ मन?’ कसैलाई सोध्नुहोस् अथवा कसैले हजुरलाई यो प्रश्न सोध्यो भने त्यही मनमा के उत्तर आउँला? मनलाई न देख्न सकिन्छ, न स्पर्श गर्न सकिन्छ, न नाप्न सकिन्छ, न जोख्न सकिन्छ!…
हर्कबहादुर लामगादे 'रोहित'	 १८ आश्विन २०७७ २०:०० 0
साँझको साढे छ बज्न लागेको छ । तलतिर माथितिरको घरमा सन्ध्या आरतीको मंगल भजन अनि घन्टीको आवाज आउँदैछ । साउनको महिनामा झ्याउकिरी झ्याउ झ्याउ गरी कराई राखेका छन्। माटामुनिको भ्यागुताको ध्वनित् वातारवरणमा सावित्री कान्छी घरको पेटीमा एक हाथ…
मेरो के दोष थियो?
हर्कबहादुर लामगादे 'रोहित'	 ४ आश्विन २०७७ १३:०० 0
भूइँदेखि दुई इन्च माथि दुइटै खुट्टा झुल्दै थिए। खुट्टा नीला भएका थिए। दुइटै खुट्टाका औँलामा रातो नेल पोलिस लगाइएका थिए । दुइटै हात लथ्रङ्ग भएर झुण्डि़एका थिए । मुख फिँजै–फिँज भएको थियो। दुइटै आँखा टोल्लिराखेका थिए, यस्तो लाग्दै थियो कि…
हर्कबहादुर लामगादे 'रोहित'	 ३० भाद्र २०७७ ०७:०७ 0
बुढाथोकी कान्छा बिहानीपख घर तलतिर बाख्राको पाठो चराउँदै थिए। घर छेउको बाट-बाटै हुँदै ठूल्दाई काँधमा जुआ अनि जुआमाथि हलो राखेर उँधोतिर झर्दै थिए। बुढाथोकी कान्छा बाख्रालाई किलोमा बाँधिसकेर पर जाँदै गरेका ठूल्दाइलाई सोध्छन्- "ठूले, हैन…